Olee Udiri Ahia Gị Nwere Ike withga nke Ọma na Vine Marketing | Martech Zone
Anyị na-akọrọ infographic na ịrị elu nke Vine wee nweta ihe di egwu ikpe ọmụmụ na Vine Marketing site na Brian Gavin Diamonds, mana olee banyere gị Atụmatụ Vine Marketing?
Vine, ikpo okwu nke na-egosi vidiyo nke 6 na-egwu na loop, emeela ka ihe karịrị nde ndị ọrụ 40 mee ihe. Ihe karịrị otu narị nde mmadụ na-ele Osisi Vaịn kwa ọnwa. Nke ahụ na-eme ka ikpo okwu bụrụ ala na-eme nri maka usoro ịre ahịa azụmaahịa iji bulie akara ngosi gị. N'ihi na ikpo okwu bụ ihe ọhụrụ, na usoro ahụ pụrụ iche, SurePayroll chere na ọ nwere ike inye aka ịchọpụta otu ị ga-esi jiri Vine a nyere azụmahịa gị aka.
Dị ka SurePayroll, gị Vine ahịa atụmatụ kwesịrị iso nke na-eme atụmatụ mbụ - na-eche banyere ndị na-ege gị ntị, na visuals na ụda, na-emepe emepe a isii panel storyboard. Gbaa mbọ hụ na Vine video ga-eweta nzube, ụfọdụ ihe atụ bụ:
Mepụta Vine vidiyo na-enyere ndị mmadụ aka idozi nsogbu.
Mepụta Vine vidiyo nke gosipụtara isiokwu ọhụrụ ma ọ bụ ebook.
Mepụta Vine vidiyo nke gosipụtara "Otu esi eme".
Mepụta Vine vidiyo na-agba ihe omume ma ọ bụ ezumike.
Mepụta Vine vidiyo na-akọrọ na-agbasa ozi ọma.
Mepụta Vine vidiyo nke gosipụtara ndị ọkacha mmasị gị.
Mepụta Vine vidiyo na-ekerịta ego, dere ma ọ bụ freebie.
Mepụta Vine vidiyo na-ekele ndị ahịa gị.
Mepụta usoro vidiyo Vine iji mee ka ndị na-ekiri laghachi azụ.
Ike a Vine video na a sinik elu n'ime gị ụlọ ọrụ omenala.
Ma tinye akara gị mgbe niile, nkọwa ederede, njikọ na weebụsaịtị gị, a hashtag emere nke oma, na Oku Ime-Omume!
Tags: Surepayrollvineosisi hashtagsechiche vaịnosisi loopsahịa vaịnvine azumatụmatụ vaịnvidio vidio